iMessage ebighị Error On iPhone? Nke a bụ ihe mere & ndozi! - Iphone
iphone m gbachiri agbanwughi
otu esi emechi ngwa apple watch
kedu ngwa email m
ntụgharị ihuenyo na ipad ikuku 2
iphone anaghị enweta ozi foto
iMessage ebighị Error On iPhone? Nke a bụ ihe mere & ndozi!
Can’tnweghị ike ịgbalite iMessage na iPhone gị ma ị maghị ihe kpatara ya. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, iPhone gị enweghị ike izipu iMessages. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere ị na-ahụ njehie mmeghe iMessage na iPhone gị wee gosi gị otu esi edozi nsogbu ahụ maka ihe ọma !
Gịnị Mere M Ji Anata iMessage ebighị Error?
E nwere ọtụtụ dị iche iche ihe mere i nwere ike na-ahụ iMessage ebighị njehie gị iPhone. Iji rụọ ọrụ iMessage, gị iPhone nwere na-jikọọ na Wi-Fi ma ọ bụ cellular data. O ghakwa inwe ike inweta ihe Ozi ederede SMS , ọkọlọtọ ozi ederede na-egosi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ egosipụta.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ ekwentị ọ bụla gụnyere ederede ederede SMS, mana ị ga-achọ ịlele akaụntụ gị ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ akwugo ụgwọ. Nwere ike tinye ego na akaụntụ gị tupu ịnata SMS ederede.
otu esi egosi pasent batrị na iphone xs
Ihe a niile bụ ikwu na anyị enweghị ike ijide n’aka ma ọ bụrụ na nsogbu dị na iPhone gị ma ọ bụ atụmatụ ekwentị gị na-akpata mmeghe ọrụ iMessage. Soro ntuziaka nzọụkwụ dị n'okpuru iji chọpụta ma dozie ezigbo ihe kpatara ị na-enweta njehie mgbe ị na-agbalị ime ka iMessage rụọ ọrụ!
Gbaa mbọ hụ na Ọnọdụ ụgbọ elu agbanyeghị
Mgbe ọnọdụ ụgbọelu dị, iPhone gị agaghị ejikọ Wi-Fi ma ọ bụ netwọ cellular, yabụ na ị gaghị enwe ike ịgbalite iMessage. Meghee Ntọala ma hụ na mgba ọkụ na-esote Ọnọdụ ụgbọelu apụ.
Ọ bụrụ na Ọnọdụ ụgbọelu agbanyụrị, gbalịa imegharị ya ma gbanyụọ ya ọzọ. Nke a nwere ike mgbe ụfọdụ idozi obere Wi-Fi na cellular Njikọta mbipụta.
Lelee njikọ gị na Wi-Fi & Cellular Data
iMessage nwere ike rụọ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na iPhone gị ejikọrọ na netwọk Wi-Fi ma ọ bụ data cellular. Ọ dị mma ịlele okpukpu abụọ ma jide n'aka na iPhone gị jikọtara na Wi-Fi ma ọ bụ data cellular! Nke mbụ, mepee Ntọala na pịa Wi-Fi iji hụ ma ọ bụrụ na iPhone ejikọrọ na Wi-Fi.
Gbaa mbọ hụ na agbanwuru ihe na-esote Wi-Fi wee gbanye yana akara na-acha anụnụ anụnụ na-egosi n’akụkụ aha netwọkụ gị. Ọ bụrụ na Wi-Fi dị, nwaa ịtụgharịa ya wee laghachi.
iphone agaghị agbanye mgbe emelitere ya
Na-esote, gaa Ntọala, pịa Cellular , ma hụ na ịgbanwee na-esote Cellular Data dị. Ọzọ, ị nwere ike chọọ ịnwa ịtụgharị mgba ọkụ na ịlaghachi nwere ike idozi obere glitch ngwanrọ.
Nịm gị iPhone ka Correct Oge Mpaghara
iMessage ebighị nwere ike mgbe ụfọdụ ida ma ọ bụrụ na gị na iPhone ka atọrọ ka ihe ọjọọ oge mpaghara. Nke a na-eme ndị mmadụ na-eme njem na mba ọzọ na-echefu nwere ha iPhone imelite ya oge mpaghara na-akpaghị aka.
Mepee Ntọala wee pịa General -> Datebọchị & Oge . Tụgharịa mgba ọkụ na-esote Nịm akpaghị aka iji jide n'aka na gị iPhone mgbe niile ka ziri ezi ụbọchị na oge mpaghara!
Gbanyụọ iMessage Gbanyụọ ma Gbanye
Toggling iMessage gbanyụọ ma laghachi azụ ọzọ nwere ike idozi obere nsogbu nke na-enye iPhone njehie mmemme iMessage. Nke mbụ, mepee Ntọala wee pịa Ozi .
Kpatụ mgba ọkụ na elu ihuenyo dị n'akụkụ iMessage iji gbanyụọ ya. Kpatụ mgba ọkụ ọzọ ka ị gbanwee iMessage azụ! Ga-amata na ọ bụ mgbe mgba ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ.
iphone m agaghị abụ ndabere maka icloud
Lelee Maka Mmelite Ntọala ụgbọelu
Onye na-ebu gị ikuku na Apple na-ewepụta mmelite ntọala ụgbọelu ugboro ugboro iji melite ike gị iPhone ijikọ na netwọk gị. Mepee Ntọala wee pịa General -> Banyere iji hụ ma ọ bụrụ na melite ntọala ụgbọelu dị.
Dịka, mmapụta ga-egosi na ihuenyo n'ime sekọnd ole na ole ma ọ bụrụ na mmelite dị. Ọ bụrụ na mmapụta ahụ egosi, pịa Mmelite .
Ọ bụrụ na mmapụta ahụ apụtaghị mgbe ihe dị ka sekọnd iri na ise, melite ntọala ntọala ụgbọelu nwere ike ọ gaghị adị.
Melite iPhone gị
Apple weputara mmelite ohuru iOS iji dozie obere chinchi ma webata atụmatụ ọhụrụ maka iPhone gị. Mepee Ntọala wee pịa General -> Mmelite ngwanrọ . Ọ bụrụ na mmelite iOS ọhụrụ dị, pịa Ibudata na Wụnye .
Banye na Apple ID gị
Gingbanye ma laghachi na NJ Apple gị nwere ike idozi obere nsogbu na akaụntụ gị mgbe ụfọdụ. Ebe ọ bụ na iMessage na-jikọrọ gị Apple ID, a obere glitch ma ọ bụ njehie na akaụntụ gị nwere ike ime ka ebighị njehie.
Meghee Ntọala pịa na Aha gị n’elu ihuenyo. Pịgharịa gaa ala niile wee pịa Pụọ . A ga-akpali gị ịbanye paswọọdụ Apple ID gị tupu ịbanye.
Ugbu a ị banyela na Apple ID gị, pịa Banye bọtịnụ. Tinye Apple ID na paswọọdụ ịbanye azụ!
ihuenyo mmetụ iphone 6s anaghị anabata
Tọgharia Network Ntọala
Mgbe ịtọgharịrị ntọala netwọki nke iPhone gị, Wi-Fi, Cellular, Bluetooth, na ntọala VPN niile ga-ehichapụ ma weghachite nrụpụta ụlọ ọrụ. Ga-enyerịrị okwuntughe Wi-Fi gị ma jikọgharịa ngwaọrụ Bluetooth gị na iPhone ozugbo ịtọgharịrị zuru ezu.
Mepee Ntọala wee pịa General -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala . Tinye iPhone passcode na akwado nrụpụta site na ịme ọpịpị Tọgharia Network Ntọala . Gị iPhone ga-akwụsị, tọgharịa, wee gbanye ọzọ mgbe nrụpụta zuru ezu.
ego ole ka ịkpa nwa na -efu?
Kpọtụrụ Apple & gị Ikuku ụgbọelu
Ọ bụrụ na ị ka na-enweta njehie ọrụ iMessage na iPhone gị, oge eruola ka ịkpọtụrụ Apple ma ọ bụ onye na-ebu ikuku gị. Ekwadoro m ịmalite na Storelọ Ahịa Apple, ebe ọ bụ na iMessage bụ atụmatụ pụrụ iche na iPhones. Nleta Ebe nrụọrụ weebụ na-akwado Apple iji melite oku ekwentị, nkata ndụ, ma ọ bụ nhọpụta mmadụ na Storelọ Ahịa Apple dị gị nso.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọtara na iPhone gị enweghị ike ịnata ozi ederede SMS, nzọ gị kachasị mma bụ ịkpọtụrụ onye na-ebu ikuku gị na mbụ. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke nọmba nkwado ndị ahịa nke ndị isi ikuku anọ. Ọ bụrụ na edeghị ụgbọelu gị n'okpuru ebe a, Google aha onye na-ebu gị na 'nkwado ndị ahịa' iji nweta enyemaka.
T-ekwentị : 1- (877) -746-0909
iMessage: Tinye n'ọrụ!
Successfully rụọla ọrụ iMessage nke ọma na iPhone gị! ’Ll ga-amata kpọmkwem ihe ị ga-eme oge ọzọ ị ga-ahụ njehie mmeghe iMessage na iPhone gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ, hapụ ha na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.